Forum serasera malagasy Ny Fitadidiana (mémoire) - Dinika forum.serasera.org
Ny Fitadidiana (mémoire)
Fitohizan'ny hafatra : Ny Fitadidiana (mémoire)
rhaj0 - 17/10/2016 19:01
Na zokiny na zandriny dia, mino aho fa samy mieritreritra hoe, ahoana tsara ny @ Fitadidiana ity, ary ahoana no hanatsarana azy.. Ny zandriny te-hahay raha vaovao, na dia voan'ny hanaovana tsianjery-boka azany izany. Ny zokinjokiny te-hizara bilagy. Ny zokinibe tsy te-ho lazaina fa voan'ny Alzeihemer...
Izaho izao dia vaky vava hoe, fa dia maninona loatra azany i Rafitadidiana ity no mamilafila...
1- raha mandeha eny @ arabe aho, dia mahita lozam-pifamoivoizana ohatra, dia mety hoe, 10 segondra raha be indrindra no nandalovako teo, fanefa dia misy ary betsaka ny antsipiriany "tadidiko". Na ireo fiara sy ny lokony, na ireo mpamily sy izay nahavoa azy tao, na ireo mpijery ets... na hoe, taiza na koa t@ firy no nitranga ity seho ity...
2- nefa raha angatahana aho, hitadidy seho iray @ antsipiriany, mety @ asa io na fianarana ets... dia... na 1 minitra azany no amena ahy, dia TSY betsaka noho ny tadidiko @ tranga io ambony io no ho tadidiko.
Koa ahoana ny hanazavana io ohatra io.. Dia inona no lesona azo tsoahina mba ahatsara ny fitadidiana ?
endriny - 18/10/2016 06:52
Fomba fiasan'ny atidoha sy ny taova manodidina azy mihintsy mantsy izay.
1. Raha misy loza hitanao, tsy nampoizina io a. Hitan'ny maso tampoka na tsinahy, tonga dia ny saina iray manontolo mipaka sy mifototra amin'ilay tranga. Izany hoe ohatran'ny fakantsary ilay olona eto, ka mipika indray mandeha ny masony dia tadidiny daholo ny tranga rehetra. Saingy ity, ny zavatra rehetra tao aoriana an'io dia tsy misy tadidiny rha tsy afaka. Raha nandalo olona manjabe aza izy taorianan'io tranga voalohany io, dia tsy hitany sy tsy fantany akory hoe nisy bandy bogosy sy nanao ranomanitra nandalo azy taorian'ilay nahitany loza. FAKANTSARY.
2. Ny fianarana lesona dia mitaky ny tsirairay hifantoka amin'ilay lesona, kanefa ny saina maro sahanina, fa sady mijery ny soratra vakiana no mamentsoventso hiran'i Mahaleo any ambadika any, no sady miheritreritra ny naoty mety ho azo raha mahay na tsy mahay, sady miheritreritra hoe iza amin'ireto aza no mety ho adinin'ilay mpampianatra. Hany ka ny maso sy ny saina dia "terena" hanaraka tsirairay ny antsipirihan'ny soratra vakiana sy ny kisary. Ka dia tsy maintsy alefa tsikelikely ilay izy. Ohatran'ny SCANNER no fiasan'ny saina sy ny taovan'ny olona eto. Ka rehefa manao SCAN moa dia tsy maintsy misy very ny resolution sasany e.
Asa mety mazava ve izay.
rhaj0 - 18/10/2016 13:09
Tena manja ilay fampitaha @ "fakan-tsary" sy ny "scanner".
Ny ahy moa, ny maha-mendy ahy izao, dia ny mba hanana fitadidiana tena raitra eee.. Ka ahoana no amolahana ny saiko ho lasa "fakantsary" rahefa mianatra ohatra!.. Maninona ohatra raha maneho lesona @ powerpoint ilay mpampianatra, dia maninona ny saiko no "mi-scan" ilay sary io, fa mba tsy "maka sary"???
endriny - 19/10/2016 08:59
Ka miscan ianao satria efa apetrakao vao miandoha ao an-doha ilay tanjona hoe tokony ahay ianao e. Dia lasa tenany ao ambaky ny saina ao foana io, dia sady mamafa an'io ianao no mitadidy ilay lesona vaovao. Tamin'ilay loza anefa, ianao tsy niheritreritra hoe ahita loza eny an-dalana mihintsy.
Ka eo @ powerpoint ange misy zavatra maro be mitranga e, ilay hazavana be fotsiny aloha dia efa mahakamo ny maso. Ny sofina tsy maintsy atongilana tsara mihaino hoe io amin'ny tabilao io tokoa ve no nolzain'ny mpampianatra. Ny maso tsy maintsy mijery tsirairay ny fizotry ny seho rehetra fa tsy seho iray akory.
Dia manao manao famintinana ny atidoha avy eo, ka izay misy sary milooo tsara nanaitra ny fakantsary sy izay nisy sorabaventy ihany no azony sary
rhaj0 - 19/10/2016 17:27
MIsy teny milaza io lazain'i Endriny io.. hoe "mémoire photographique". Ka dia ity hozy wikihow no fatao hazahoana ity izy, zaraiko eto..
@ ankapobeny, ny lakile dia Fi(s)aina madio (hygiene de vie), sy stratejia vitsivitsy (mila fifantohana ampiana fikafika na teknika mnémonique.
Fa t@ radio nahenoiko io resaka io, dia lazainy koa hoe
1- ilay fitadidiana ilay lozam-pifamoivoizana, dia vokatra-na fitadidiana-TSY-fanahy-iniana, na "mémoire non-intentionnelle".
2- ilay fitadidiana tadiavina @ fianarana anefa dia vokatra-na fitadidiana-fanahy-iniana, na "mémoire intentionnelle"
Ka ilay faharisihana (motivation) sy izay fipetraky ny saina (état d'esprit) rahefa roboka ao amina "fitadidiana-TSY-fanahy-iniana" izany no mila fantarina, dia ametrahana, na koa amolahana ny tena mba ho tonga @ izany... sa ahoana?
rhaj0 - 26/10/2016 17:00
Dia tadidio hono ny karazana tadidy
1- mémoire épisodique izay zanaky ny mémoire à long terme. Io izany ny fitadidiana tranga na seho iray
2- mémoire sémantique.. fitadidiana ireo famaritana. Ohatra hoe, ny rambon'ny sifaka dia mainty/fotsy
3- mémoire prodécurale.. fitadidiana lahasa. Ohatra hoe, ahoana ny fitaingenana bisikileta
Ka ny mahavariana na mahaliana (ahy) hono, dia ireo #2 sy #3 dia toa raikitra lalina ao @ fitadidiana foana. Tsy ho verinao tadidy mihintsy ny lokon'ny rambon'ny sifaka, na koa, ny fitaingenana bisikileta.
Dia fa maninona azany ilay mémoire épisodique no (mora) hadino??
Ohatra hoe, aiza ny lakile? Tadidinao fa ilay lakile dia bingobingo. Tadidinao ny fampiasana io lakile io. Fa maninona no tsy mba mekanisma fitadidiana toa izay koa no misy, mba hampipetaka ao an-tsaina tsara, fa napetraka tetsy ambony latabatra anie ilay lakile teo?.. manjary lany ny andro fa very foana ilay lakile...
Ny ahy ho'a, ny maha-mendy ahy izao, dia ny mba hanana fitadidiana tena raitra eee..
ka mety atao toa izao ve hoe...
- ny "lakile ambony latabatra" dia atao hoe "famaritana" (sémantique),
- sa ve hoe, atao "procedural" ilay "mametraka lakile ambony latabatra"
('zafady migonongonona irery eto fa ... very tadidy eee
rhaj0 - 14/11/2016 22:18
Resaka ankapobeny hafa momba ny fitadidiana:
1- Ny olona hono dia mahatadidy eo @ zavatra +/- 7 eo ho eo @ tranga na seho irey. Izany no nisafidianan'ny tompon'andraikitra ny isan'ny isa @ nomerao telefaonina aty amerika avaratra ho ananki-fito. Isa mazika izany: FITO (7). Ka eto izany, raha tena mahatsapa-tena ianao ny miezaka ny hitadidy piti-dresaka 7 @ izay tranga eo, dia mety tsy ho very tadidy ilay izy.
2- ny fahaverezan'ny tadidy dia miandalana; fa raha ohatra ka iverenana resahina ny resaka teo, isaky ny segondra na minitra, na afaka ora 1, dia (mety) ho voatadidy ihany. Izany no atao rahefa ilay mamerimberina ilay nomerao telefaonina vao azo teo iny. Koa izay izany no stratejia raha te-hahay: mila mamerin-desona na mamerin-dresaka matetika.
3- Ilay tadidy hono dia toa boky eraky ny tranom-boky: voatahiry ao anaty tranom-boky ny resaka, fa kosa, ny amoahana na isarihana ilay boky no olana. Satria hono, nisy fanandramana iray. Voan'ny Alzeihemer ilay ramatoa, ary isa-maraina, dia TSY mahatadidy ny dokoterany. Koa izao no nataon-dradoko: isaka ny mihaona zareo ny maraina, dia tsindrominy @ paingotra i ramatoa. Ny andro manaraka, dia tadidin-dramatoa ny tsindrom-paingotra, ka dia mihataka izy, fa kosa, mbola tsy tadidiny ihany Radoko. Ka hoe, tokony ao anaty tranom-boky ihany Radoko, fa ny isarihana izay info, Radoko sy ny anarany, no olana. Ka dia any izao hono ny fikarohana sasany no mandalindalina...
lantoratsida - 13/02/2018 13:28
toa misy naoro hevitra ahy hoe ravina mente no manatsara ny fitadidiana
Page rendered in 38.2112 seconds